Ukugula okusha kwezingane | Scrolla Izindaba
Ukugula okusha kwezingane
Sekuvele ukugula okungaqondakali okuhlasela izingane ezinegciwane le-Covid-19 e-Europe naseMelika.
Izingane azivamisile ukuguliswa i-coronavirus kakhulu – kodwa ezinye ziyagula.
Esinye sezibhedlela sase-Italy esinabantu abangamashumi amabili abanesifo se-corona,
kanye nezingane eziyishumi nambili ezisegumbini labagula kakhulu e-UK.
EMelika nase-New York abaphathi baphenya isibalo sezingane eziyishumi nanhlanu
ebezitheleleke ngegciwane le-Covid-19 kanye nalezi eseziluleme.
Izimpawu zalesi sifo zibala uhudo, izinkinga zenhliziyo kanye “nobuthi obusongela impilo”.
Abezempilo e-Britain baxwayise zonke izibhedlela zezingane ukuba babhekisise lesi sifo
esingaqondakali futhi esingachazeki. “Siyasilandelela lesi sifo,” kusho udokotela uHoward
Zucker waseNew York etshela abephephandaba iNew York Times.